Go’aamadii ka soo Baxay Shirkii Addis Ababa | Starfm.co.ke	Tuesday, May 21st, 2013	Home
Go’aamadii ka soo Baxay Shirkii Addis Ababa
Published on May 24, 2012 by Sacdiya Garabey · 1 Comment
Share24.May.2012:- Shirkii looga Hadlaayay Arimaha Somaliya ee ka socday magaalada Adis Ababa ee Xarunta Wadanka Itoobiya ayaa waxaa laga soo saaray qodobadaan:-
-In 26ka May ay soo gebagebeeyaan howshooda dhexdhexaadinta gudi loo xilsaaray xalinta odayaal dhaqameedyada soo xulaya ergada ansixin doonta Dastuurka islamarkaana soo xuli doonta Baarlamaanka Cusub.
-In 1da June lasoo gebagebeeyo howlaha lagusoo xulayo gudiga Ansixinta Dastuurka iyo soo Xulida Baarlamaanka Cusub ee uu dalku yeelanayo.
-in ugu dambeyn 20ka bisha June la helo oo lasoo gudbiyo magacyadii ugu dambeeyey ee Golaha Ansixinta ayadoo loosoo gudbinayo gudiga Farsamada.
-In 30ka bisha June ay magaalada Muqdisho xaadir ku ahaadaan golaha Ansixinta.
-In 2Jully ay si rasmi ah howshooda u bilaabaan gudiga Ansixinta iyo shirarkooda.
-in 10ka Jully la ansixiyo Dastuurka.
-in 15ka Jully gudiga loosoo gudbiyo ugu dambeyn magacyada xubnaha cusub ee Baarlamaanka soo geli doona.
-in 20ka Jully la dhaariyo Baarlamaanka Cusub.
-In 04ta bisha August 2012 la qabto doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Ku xigeennadiisa.
-In 20ka August 2012 la qabto doorashada Madaxweynaha Dalka.
-In Wadashaqeyn joogta ah ay yeeshaan saxiixayaasha Road-Mapka ilaa inta lagasoo dhameystirayo howshan.
Send article as PDF Readers Comments (1)
Mohamed abdi ali says:	May 24, 2012 at 7:39 am	Arimahan waa wax lagu farxo, ALLAH waxaan ka baryeynaa in uu no hergaliyo Amiin!
Local News	Kulan nabada looga hadlayay oo ka dhacay mandhera	May 21, 2013 falal amni daro ah oo ay dad badan ku dhinteen kuwo kalana ay ku dhaawacmeen ayaa maalmihii aynu ...	Gudiga adeega Booliiska oo soo jeediyay hindisa mushaarka loogu kordhinayo askarta Booliiska.	May 21, 2013 Booliiska dalka ayaa mushaar wanaagsan qaadan doona hadii hindisa cusub oo loo bandhigay gudiag mushaaradka iyo gunooyiinka ay ...	Gudiga dhaqan galinta dastuurka oo ka digay in xildhibaanada ay mushaarka kordhistaan .	May 21, 2013 gudiga adeega pooliiska ayaa waxa ay iyagu dalbanayaan in pooliiska la siiyo mushaar la mid ah midka militiriga ...	Shacabka Deegaanka wajeer oo loogu baaqay in ay la shaqeeyaan maamulka Deegaanka wajeer .	May 21, 2013 Gavanaaga countiga Wajeer Axmed cabdulaahi ayaa ugu baaqay shacabka countigaasi in ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi ...	Hogaamiyaasha Gudiyada Barlamaaniga oo la doortay.	May 20, 2013 Dhamaan gudiyada barlamaaniga marka laga reebo laba gudi ayaa waxaa maanta doorsho dhacday la wareegay hogaankooda isbahaysiga Jubille.
Ms Amina ...	Madaxwayne Kenyatta oo digniin u diray burcada danbiyada gaysata	May 20, 2013 Madaxwayne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dowlada ay wax waliba oo karaankeeda ah samayn doonto si loola dagaalamo ...	Sports	Falcao ” Warka Mustaqbalkeyga Laga Sheegey Waa Been Abuur ”.	May 18, 2013 Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Radamel Falcaoayaa beeniyay in uu wax ka og yahay in ay jiraan wadahaadlo uu ...	Tababarahii Hore Ee Kooxda AC Milan Massimiliano Allegri oo U Wareegay Kooxda Roma	May 18, 2013 Mulkiilaha kooxda Milan Silvio Berlusconi ayaa tibaaxay in tababaraha kooxda Massimiliano Allegri uu u wareegayo kooxda Roma marka ...	Seedorf Oo Loo Badinayo Inow Tababara Ka Noqdo Kooxda AC Milan	May 18, 2013 Mulkiilaha kooxda Milan Silvio Berlusconi ayaa dhawaan sheegay in tababare Massimiliano Allegri uu ka tagayo kooxda isla markaana ...	David Moyes Kulanka So Socoto Maxoy Samedonaa ?? Maxadna Ku Qiyaasi Karta ?	May 18, 2013 Tababaraha cusub ee kooxda Manchester United, David Moyes ayaa diyaar u ah in uu bilaabo shaqada kooxda United ...	Xidiga Barcelona Andres Iniesta Oo Aan Ku Faraxsaneyn La Joogitanka Kooxdaasi	May 18, 2013 Ninka labaad ee ugu wanaagsan kooxda Barcelona Andres Iniesta ayaa sheegay in uusan ku faraxsaneyn xiligan Barcelona .